Nitana ekipa divizionina voalohany malagasy maro ihany koa ny tenany. Isan’ireny ny USJF Ravinala ,ny AS Adema , Elgeco Plus sy ny maro hafa. Raha ny fanampim-baovao voaray dia noho ny fahatairana tampoka no nitarika ny fahatapahan’ny lalan-dra any amin’ny loha (AVC) izay efa nanomboka nikiky azy taona vitsy lasa izay no anton'izao fampidirana azy hopitaly izao.Tsy nahatsiaro tena izy teo am-pahatongavana teny amin’ny hopitaly, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Isan’ny naneho firaisam-po sy fankaherezana ity namany ity moa ny mpanazatra, Nicolas Dupuis, raha vao nahare izao vaovao izao. Tsiahivina fa ny volana may 2019 izy no nandrafitra ny ekipam-pirenena Barea. Mifankahafantatra tsara amin` I Nicolas Dupuis izy ary niara-dia taminy tany Egypta, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan` I Afrika “CAN 2019”farany teo. Ny gazety Tia Tanindrazana dia mirary fahasalamana feno ho an` i Maitre Raux Auguste amin` izao aretina mianjady aminy izao.